के सरकारले दिन लागेको जोन्सन एन्ड जोन्सनको कोभिड खोप सुरक्षित छ? :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
के सरकारले दिन लागेको जोन्सन एन्ड जोन्सनको कोभिड खोप सुरक्षित छ?
स्वास्थ्यखबर शुक्रबार, साउन १, २०७८, २०:४०:००
प्रश्न : के सरकारले दिन लागेको जोन्सन एन्ड जोन्सनको कोभिडविरुद्धको खोप सुरक्षित छ?
उत्तर : सुरक्षित छ। अमेरिकाको औषधि नियामक निकाय (एफडिए)ले जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोपले स्नायू प्रणाली सम्बन्धी गीयान बार्रे सिन्ड्रोमको जोखिम बढाउन सक्ने जानकारी दिएपछि यो खोप सुरक्षित नभएको हल्ला फैलिएको छ। तर अहिलेसम्म उपलब्ध प्रमाणले खोप र गीयान बार्रे सिन्ड्रोमको जोखिमबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको देखिएको छैन।
अमेरिकाको औषधि नियामक निकायले यो रोग एकदमै बिरलै देखिने र यसको जोखिम भन्दा यो खोप लगाउँदा हुने फाइदा बढी हुने कुरामा जोड दिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पनि यस बारेमा जानकार छ र आगामी दिनमा निगरानी अघि बढाउनेछ। जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप लगाउँदा हुने सम्भावित जोखिमभन्दा यसले कोभिड-१९ विरुद्ध दिने लाभ बढी रहेको छ। त्यसैले यस्ता हल्लाहरुको प्रभावमा नपरि नि:सङ्कोच तोकिएको मिति र स्थानमा गई आफ्नो पालो अनुसार खोप लगाऔं।
यस्ता छन् दही-चिउराका फाइदा ४२ मिनेट पहिले